Akhriso War Murtiyeedka laga soo saaray Shirka Golaha Amniga Qaranka oo lagu soo gaba gabeeyay Muqdisho+Sawiro. – Hornafrik Media Network
Akhriso War Murtiyeedka laga soo saaray Shirka Golaha Amniga Qaranka oo lagu soo gaba gabeeyay Muqdisho+Sawiro.
By HornAfrik	 Last updated Jul 10, 2017
Golaha Amniga Qaranka ayaa kulan kuyeeshay magaalada Muqdisho intii u dhaxeysay 5ta ilaa 10ka bisha Luulyo, 2017.
Kulanka waxaa shir-guddoominayay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, waxaana ka soo qeyb galay Ra’iisul Wassaraada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre, Ra’iisul Wasaare Ku Xigeenka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed, Madaxweyneyaasha Dowlad Goboleedyada Puntland Mudane Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, Jubaland Mudane Axmed Maxamed Islaam, Koonfur Galbeed Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan, Galmudug Mudane Axmed Ducaale Geelle, Hirshabelle, Mudane Cali Cabdullaahi Cosoble, Guddoomiyaha Gobolka Benaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho, Mudane Thaabit Cabdi Maxamed, Wasiirrada Caddaaladda, Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah, Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta, Gaashaandhigga, Amniga Gudaha, iyo Taliyeyaasha Ciidamada Qalabka Sida.
Golaha Amniga Qaranka waxa uu bogaadiyay shaqada wanaagsan ee ay dowladda dhexe ka qabatay arrimaha amniga sida xasilinta caasimadda, siyaasadda iyo xoojinta xiriirka ka dhaxeeya dowladda dhexe iyo dowlad-goboleedyada.
Kadib markii uu Goluhu qiimeeyay xaaladaha amni ee ka jirta dalka, waxay isla garteen in la xoojiyo dagaalka lagula jiro kooxaha nabad diidka ah, meelna looga soo wadajeesto cid kasta oo ku taageerta dhaqaale, gabbaad ama faafineysa afkaartooda gurracan.
Golahu, markuu dib u eegay Heshiiskii Amni ee 16-17 Abriil, 2017, uuna dhageystay talooyinkii ay soo jeediyeen Guddi hoosaadyada Difaaca iyo Amniga ee Golaha Shacabka, tixgeliyeyna aragtiyada kala duwan ee bulshada, waxaa talooyinkaas lagu biiriyay Qorshaha Amniga Qaranka.
Golahu, waxaa kale oo uu ku heshiiyay sameynta guddi farsamo oo ka shaqeeya dhameystirka Qaab dhismeedka Amniga Qaranka oo ay ku jiraan qaab-dhismeedka Ciidamada Nabadsugidda, Booliska, iyo ciidanka Asluubta. Guddidaas waxa uu ka kala imaan doonaa Dawladda Federaalka, Dawlad-goboleedyada iyo Gobolka Benaadir.
Golaha oo garowsan baahida loo qabo in siyaasad mideysan laga yeesho horumarinta nidaamka federaalka, dib-u-eegista dastuurka iyo doorashooyinka qof iyo cod ee 2020ka, waxay ku heshiiyeen in taabo gelinta qodobadaas loo maro hannaan ku salaysan wadatashi joogto ah oo 3dii biloodba mar ah.
Golahu waxa uu isku raacay in sharciga lagu dhisayo Golaha Amniga Qaranka la horgeeyo Golaha Shacabka si waafaqsan Qodobka 111, Faqrada (h) ee Dastuurka KMG.
Golahu, waxa uu meelmariyay xeerka anshaxa ee kulamadooda iyo Fulinta Qorshaha Amniga Qaranka.
Ugu dambeyntii, Waxaa la go’aamiyay in Kulamadda Golaha Amniga Qaranku ay qabsoomaan 3-dii Bilba Mar.
War Muriyeedka Waxaa Saxaafadda u akhriyay Wasiirka Gaashaandhiga ee Somalia,
Halkan ka akhriso isagoo rasmiya
Sawiradda Shirka Amniga Qaranka
Madaxwaynaha oo Gudoominaya Shirka Amniga Qaranka
Wasiirka Gaashaandhiga oo Saxaafadda u Akhrinaya War Murtiyeedkii Shirka.
Wasiirka Gaashaandhiga Somalia
Wasaaradda Arrimaha Dastuurka Soomaaliya oo kulan wadatashi ah ku qabatay Baydhabo+Sawiro
Maxay ka midaysan yihiin Istaraajiiyadaha lagu fashilayay Madaxwaynihii Hore iyo kuwa hor yaala kan Hadda ka taliya Somalia,?